उवा निल नीके उवा, दीका नडु नके नदु निजी, दी ओके उके नके ना ओ गा – ईवे जी नडु नकुवा का मैं घाघरिया इहे ओ तुला.
Iji mee ka nke ahụ b merzi eziokwu, साइट ना oge ọ mechara, hara ga-abụrịrị na-ga-enwe ikemalite itemalite ọzọ.
इहे नइल एक मारके manma, मन ओले नी’म जी’मारा ना ịdịnaya ị ना-एज़ुते ना weebụ bụ obere irinụ मिमीरी आइसपे?
Amụma: टपु upगा n’ihu, ị dk mkpa ka ị ghọta na ụthetọ ihe dị na Web Gbara ịchịchị na-akwadoghịwu। N’bbanyeghị ihe em na-eme, en ga-enwe ike ịnị ना-अमघọ अहा। तिनये ना इहे ndụ gị!
0.1 1. इबुडाता मा w inye ihe nchịgharOR टो
0.2 2. Tọlee ụkwụ ụgwa maka ụrọ Nt Onala Onwe Gị
0.3 3. डकडकगो byi एनी जीị
0.4 4. देबने अहा माका adrees e ozi-e
0.5 5. Igwe ntanetị weebụ nchwakwa
1 केडु ओटू न्चक्वा सी du ना प्ले ना वेब गबरा ịch otchịrị?
1.1 Ụgwụ दवा
1.2 एगबे, सोना ना एगो nkịt,
1.3 नितिनये न ममबी इवु ममेụहm
2 Nch Nkịta Ntanetị वेब वेब
2.1 १- गबा mbọ hụ na ihe nchịghar na तोर ना njedebe
2.2 2. वाल्ज़ो ज़ोरो एज़ो
2.4 6. ज़ोटा बिटकॉइन ना ब्लॉकचेन
2.5 8. Ọवा
2.7 12. अपोल 4 बिटकॉइन
2.9 16. .r. ESCROW
3 Ajuju ajuputara Na Ntughari N’aga n’ile n’ile
1. इबुडाता मा w inye ihe nchịgharOR टो
N’agbanyeghị na ọ dbu ugbu a da ka ihe nchọghar e a na-ejikarị eme ihe iji nweta akụkụ nke Weebụ Gụara Ọchịchị, TOR (aka, ihe nchọgharị weebụ। Na-ee-na-e-na-e).
Taa, a bụ otu n’ime ọzle ole na ole iji nweta .onion weebịsa wetị, nke dị na Web Dark.
TOR b n nsụgharị nke nchịgharụ weeb, फ़ायरफ़ॉक्स, gbanwee iji kwe ka ndị ọrụ na-agagharị na weebụ n’enweghị अहा। एक ना-एमे nchọgharị ahji iji gbochie ma em bụ nye ndụmidedụ megide mgbalị ndị merụ iji mee ihe ndị nwere -ike igosipụta njirimara ha, dịka ịmeghachi akkịkk nkk.
Mgbe g na-echere TOR ibudata, wep ogta oge iji rachie otu mpempe akwụkwọ kpuchie anya igwe elekere kamera gị। Ị माघime इहे वेरे इिके.
ना – लेले विदियो नीके ममेघे स्थल ना तोर.
2. Tọlee ụkwụ ụgwa maka ụrọ Nt Onala Onwe Gị
Netw Netk Nhọrọ Onwe Gị (VPNs) bị sava ọọ jikọọ na iji nweta weebw। सावा ndị a na-enyere aka wachekwa mmalite gị ma nwee ike ikeomi ebe si n’ọtụtụ ebe ndị ọzọ n’ụwa। Ọ b e ezie na TOR na-ekpuchi njirimara gụ, ị dzghọ ezobe ịnọdụ gz.
माका ndọ ना-ईजीई ụr na वीपीएन ना mbị, w nwere ike tinye otu nke kachasị mma wee banye ExpressVPN। एचेबुला ụbụlagodi na ha nwere ọbịchula ụbọch en 30 na – enweghị oge ị ga – enyocha ụrụ ha.
अ-एट-अरो वीपीएन एमजीबे ọ ना-अचगहरị ना ụchịchịrị ịchịchỌrị। Ọ ना – agbakwunye Ọkwa nchebe ọz data na data gị ma zoo ụnịdọ gị। Biko kwado ndị mgbasa ozi any Express – ExpressVPN ma nọrọkwa na ntanetị mgbe-na-eme nchọgharị ịchịchịr n.
3. डकडकगो byi एनी जीị
Ị ना-अगघरị ना वेब गबरा ọsị dhe iche। Cheta usoro nke na-emekar us: ‘Google bị enyi g?’? ,Fụn, Google aaghị edepịta saịt Web na Web Gbara ịchịch yarere, ya mere n’ebe ahụ, ezigbo enyi gị ga-abụ DuckDGo, nke na-arụ ọrụ yiri ya.
4. देबने अहा माका adrees e ozi-e
Ugbu a na bu dị njikere ,ga, ụ be oge ịdebanye maka adrees mak ozi-e na-enweghị ike ọchọta। Gmail si n’aj sijụ ahụ p nta, ọ ga-achị adrees’ ozi-e iji deba aha ụtụtụ weebụsaịtị .onion.
ए ए-ओले ना ओले en गा-एनवे ịt *le *
लेलैंटोस (ụrụ akwụ ọgwọ)
* R -ba ama na ndị a na-ab naa na .onion ngalaba, nke ọchịrw ọnweta iji TOR nchọgharị। Nd nyocha oge niile d Chromeka Chrome na Firefox agaghụ arọ ọrụ.
5. Igwe ntanetị weebụ nchwakwa
.प्याज bam ngalaba ejiri kpam kpam na weebịsaịtị Ọchịchịrị। एनडीओ ए यारी नगालबा ए ना-एमे एमजेबे नाइल, मैना एनवेघे इके etanweta ya na-enweghị ihe nchọgharị pụrụ iche dị k n TOR.
Nd a b n ọzọ dị mma nke na-enweghs nsogbu .onion adreesw ị nwere ike alenwale:
ओचिची न्योचा डकडकगो
Enwere nnukwu ndepereta nke weebịsaịton .onion dị na ọ na-ewe obere mgbalị ịchọta हा। Ọzhekwa, buru n’uche na nwere ike abadaba na ihe ndọ nzị (na ọzọ, nke na-akwadoghị iwu, na Web Gbara Ọchịchịrị.
Ihuenyo nke ebe nrụọrụ weebb gbara ịchyochịrị। Ihe he nwere ike ịta anya wh’ n’oge ụ bụla na weebịsa wetị Gbara Ọchịchịrị – जिदेरे weebụsaịịị.
केडु ओटू न्चक्वा सी du ना प्ले ना वेब गबरा ịch otchịrị?
Ọ na-ada nada na enwere obi ọtke nke amaghị ama na ndị a na-adịghị akọwa, mana dị ka oké osimiri na-acha anụnụ aụnụ, ọtụtụ ihe ize ndụ-ezo। Dọka onye na-agba ọsụ nd (जो (ma ụ b on Jill, dik ka ikpe nwere ike ịbụ), olee otú o si dị ize ndụ iji nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gbara ọchịchịr nar?
Ọ b i ezie na e nwere ihe nd-na-eme n’eziokwu na weebb nke gbara ụkpụrụkpụ na ị gaghị ahụkarị, छोटे तेरे ụfọdụ n’ime ihe ndị ọzọ- adịgh-na-adgh-na -ghz ị गा-एसि न- asụ ngịngi.
Enwere ezigbo ihe ọj n na ndb gbara ya gburugburu nwere ike erekpata nnukwu nsogbu nye gị। Nke a na-emetụta a bịghị naanị ndọ najọọ, ma enwere ezigbo nsogbu nke nsogbu na ndị mmanye iwu, dereere na ihe ị na-eme.
Ọ byerỌ na ị kwenyeghi, ebe a bụ ụfọdụ ihe athe nke ihe na-aga n’ihu na ebe nrụọrụ weebụ gbara ọchịchịrị na ihe si na na pụta;
N’af ot mbụ a, e boro otu di na nwunye na United States ebubo maka ọre ụgwụ ọjọọ n’okpuru ụlọ ahịa ahịa nị MH4Life na saịtị dị iche iche ahịa। Ha na-eji weebụ gbara ịchịchịrere ere edịdị, iod n opioid nke a na-emejọkarị dị ka ọgwụ nụụụrụndụ na ihe ndị -zọ na-adịghị mma। ई जिदेरे ọzọ abụọ ahid n’agbanyegh a na a-eji nkuzwa nzuzo, netwọk na-emepụta nke ọma dị iche iche ‘ihe ndị ọzọ na-ezigara ya.
एगबे, सोना ना एगो nkịt,
E jidere ihe karịrị mmad na 35 na New York na California साइट n’aka ndị ọọrị gọmentụ na-arụ ọrụ na-ere ahia na netwọk weebụ। N’ime ihe ejidere karimea egbe 100, $ 3.6 na ego na 2,000 Bitcoins.
नितिनये न ममबी इवु ममेụहm
Otu nwoke पोलिश nọ na-eme atụmat-na-ere hetu ihe atụ ndere ब्रिटेन जिदेरे न वेबụ गबरा ịchịchịrị। Mgbe atịmatụ ya dị ntakịr e, e jidere ya n’ttali ebe onye agha ya kwuru na ya na-etu ọnụ na-na-enweta iar krịrị $ 17 nde na-ere ịdọrọ ụmany-nanyany-nanyy-nanyy-nany.
Nch Nkịta Ntanetị वेब वेब
Ebe e bbe na anyị kwadoro na e nwere ihe ọfọdụ na-emenye -jye na-eme na weebụ ndị gbara ọchịchịrị, ka anyị leba anya n’ụfọdụ ụzọ ịzọ ịịụereụụ ụụụụụ ụụ ụụ ụụụụụ ụụụụụụụ ụụụụụụụụụ ụụụụụụụụụ ụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụ जी इस बारे में कुछ भी नहीं है। –
१- गबा mbọ hụ na ihe nchịghar na तोर ना njedebe
Ugbu a, 9.0a4 nyochaa nyocha na-ab uga ugbu a site na ntinye akwukwọ bọtịnụ Alfa Nchọgharị (maka ndị chọrọ ịchọpụta atụmatụ ọhụrụ).
Iji ihe nchọgharị Tor dk mkpa iji gaa na sahetị .ionion, मन ngwa niile nwere adịghị ike mgbe ụfọdụ। Gbaa mbba hụ na ihe nchịgharị Tor gị de edebe ya ruo oge ma gbalea ịnọgide na-eleba anya na wakwa nhụshaya.
.प्याज nikikion: Ziki ezoro ezo
2. वाल्ज़ो ज़ोरो एज़ो
N’Nmara na e nwere ịtụthe ihe nwere ike ịz ata ebe a, ị ga-amara na ha gghghị ịkwụ ụgw na। एबे एक डीij का ओके अक्पा डिजीटल n मा नी जीhere ओरे ट्रांजेक्ट ना बिटकॉइन। Nnukwu ihe dị iche bz ezie na ụtụtw ebe a na-eji obere akpa ejiji di iche iche abụghị ndị a na-amaghị na naọtụtụ ndị na-ekwenyekwara na iwu ego। ओबेरे एकपा अक्पा bụ … nke ,ma, zoro ezo.
.प्याज nikikion: मार्केट ड्रीम
Ọ bụ ihe ijuanya na -wa ga-enwe nchọk .ta .onion, ma ebe he nbe, Facebook bhe। Nke a na Facebook kwuru na ha meparatara nd-na-achọ netwọk mmek nar enta ना-enweghị अहा। Amagh Am m na ‘amaghị aha’ na ‘mmekịr’ta’ na-arụkọ ọrụ ọnụ, ma Facebook .onion na-ekwu na ọ gaghị edebe ddekọ nke ọrụ onye yerụ.
.प्याज njikion: Nchịk nta Onwe
6. ज़ोटा बिटकॉइन ना ब्लॉकचेन
Bitcoins enyere gị उर्फ ​​nanidegide na-enweghha aha, ya mere u du ukwuu maka ndị na Tor। Ntak ị gaghị enweta saịt o एक ओजुगो साइट ना njikọ .onion? Ihe na-eme ka saịt na a dhe iche iche karụa ụfọdị ndọ ụzọ bụ na o nwere akwụkwọ HTTPS maka adaị ya .onion।!
.प्याज nikikion: Netpoleaks
D nnị ka Google nwere ndọ asimpi ya da ka DuckDuckGO (z b (ezie na m hụrụ aha ahụ n’anya!)। TORCH bOR सर्च इंजन dị mfe na minimalistic nwere ike ụnwale gụ-bịla na-arịa ịrịa duck enyi.
.प्याज nikikion: ngbọ okporo ígwè
ExpressVPN bị ọrụ वीपीएन adPNchagha mma nke nyeworo ụtụtị ndụ ụrụ nchebe nzuzo afọ niile। Ntala ya siri ike nke sava sike ike na-eti mkpu na-enwegh i aha na iji kwado ya na ha nwere ụdị ọchịchịrị dereere na saịtị हा.
.प्याज nikikion: Onye na-agba akw .na
12. अपोल 4 बिटकॉइन
Ọ dọ mgbe ọ chọrỌ ka iPhone nke Macbook ma sie ike ịkwọ ọgwụ na Bitcoin? Enwere nhwrọ n’ebe a maka g man, मन ndị ना nịmba dọ कोक। एक ना-एकपुची इक्वेंटेंट नाइले ना-एमेघे एम्पे मा न्वे इके ọrụ ịrụ n’ebe ụ bụla n’ụwa.
.प्याज nikikion: ओगीज यूबीआई
माका ndị kwenyere na ndta nta akọkw nwere onwe, web ojii nwere ụdị mbipụta pụrụ iche। ProPublica bP maka ndị na-amaja aka ike iji ike, nrụrụ उर्फ ​​ना ụdị adịghị ike। हा अबागु ab ụ bụla ma nwee URL yabasara raara onwe ya nye nke ke nwere ike wnweta साइट ना iji ihe nchọgharị Tor.
.प्याज njikion: बिटमेसेज
16. .r. ESCROW
Ọ bọrỌ na-na-achụ ọzche nchekwa (?) Iji z na ahỊa na ịntanetị, atụla egwu, enwekwara nhọrọ makụ gị। D ka ịzọ onye ịka iwu nwere ike isi nweta ego na-aga, ya mere, ọrụ ESCROW। Ọb Bitna-na-eme na Bitcoin ka ihe niile bụrụ इहे ना-अमघो.
Ịzị ahỊa ना obi gỊ na ihe niile ha na-arụ bụ ego 1.5% dy mma। हा गा-ईजाइड n’aka na-nereere ike nyochaa ihe ndị ahub eji ebubo tupu ịtọhapụ अहं gị मा मी के k esemokwu esemokwu nke atọ bụrụ ikpe ahụ.
.प्याज nikikion: वसाबी बटुआ
ओनये ụ byela chọrọ ọfụdhere ohere na weebọ mgbe ụf Securedrop ma SecureDrop bụ kpọmkwem nke ahụ। Otú ị dú, ị dị ntakịrị kar a izu, ebe e bere na e mere ya ka ikwe ka ndị na-afụ ụfụfụ nwee ụzọ isi nyefee ụlọ ọrụ ịrọ ịrịịịmg mg.
Ọ dị mma ịmara na saịt ug a ugbu a na-ejikwa ya Nnwere onwe nke Foundation। एक ना-इज़ोरो डेटा नाइले मा एनवेगी nikikọ atọ ọ bụla n’ebe ụ bbela। Ọ bp n’ezie kpam kpam!
.प्याज nikikion: विज्ञान-हब
Ajuju ajuputara Na Ntughari N’aga n’ile n’ile
ओली मेग्बे वेब्साịटị ọọjoro बिदोरो ‘बिडो’?
Akk we ihe mere eme nke weeboro zoro ezo da ka ihe ochie dụka akịkọ ntanetị n’onwe ya। Anyị ahọghị ndekọ ndekha aha nke ezigbo “mmalite ịb manchị” मन anyị kwenyere na Weebụ Ọchịchịrị anya maara taa malitere n’afọ 2000 na ntọhapụ nke Freenet.
Ọ bog iwu na-akwadoghị ọn Web na Web dụ omimi?
Achpịtaghị saịtị ndị d we na weebị dimi omimi site na nchọta ọchọchọ mgbe niile। Mkpo weebk miri emi n’onwe ya abịghw iwu na-akwadoghị, mana saịtị ụfọdụ nwere ike itinye aka na-ewighi ezi। इस्नोय न मम्मे ndị आहe नवरे उइके ụbw इवु ना-अक्वादोगु.
ỊchỌchỌ मूत Dị Ọcha?
D ka ndụ n’ezie, a na-enwekarhe ihe ize ndụ na ntanetụ ma weebụ gbara ọchịchịrị adịghị iche। Nakedo bac nke dị na ị kachasa mma awbawanye nchebe gị n’ịntanetị n’agbanyeghị ihe-na-eme। Otu ụzu isi mee nke ahụ b na site na iji VPN, nke nwere ike izo ya data ma zoo adreesị IP gị n’anya anya। चेटा वीपीएन कच्छास एमएमए ना एडेरेड एम.
केडू इहे – गा – ईम न वेब्साịटb गबरा ichịchịrị?
Yiri वेब emeghe, enwere webdọ ụrị em ga – eme na ọchịch ,rị web, na – esite na ntinye aka na nnọkọ ọnhea ahụa na ịchọgharị ahịa ahịa dị nịịntanetị। Agbanyeghb, enwerekwa ngwongwo na ụrw iwu na-akwadoghji na web ojii.
केडू इहे – गा – azuta na webụbb gbara ichịchịrị
ỌchịchỌ gbara ọchịchịrụ bị ah aa a na-achịkwaghwa achwkwa ebe ndị mmadụ nwere ike ịzụta naanịhe he bụla। Nke a gụnyere egbe, agwọ ọọjụ, aọ ọhịa na-ezighi ezi, vidiyo jọgburu onwe ya, paspọtụ adịbboroja, akaụntụ Netflix, ozi kaadị kredit, ma ọ bụ bụ ụ bụ ụụ.
Iji netwadụ Tor na-eme ka njiri mara gke nke ọma, माना a gaghọ ekwe omume। Ọ dọ mma karịa iji ụrz nzuzo raara onwe ya nye dV ka ExpressVPN.
डकडकगो bD ỌchịchuckrỌ ịchịchịrụ?
DuckDuckGo bọ igwe na-achhe ihe na-akụwap weta weebụsattionon .onion nke pụrụ iche na weebụ gbara ọchịchịrị। Ọ bọghỌ weebụ gbara ịchịchịr’ n’onwe ya। आप nwere ike Ducknweta DuckDuckGo na weebb gbara ọchịchber: ebe a: https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/
Ọ berỌ na ale nwalee ọfụdhe ihe dụ n’isiokwu a, site na ugbu a, ị chọpụtala na ihe m nyere gị bụụsụgharị dị mma nke ihe adị na Web Weghachị। N’Nzọ डोरो एना, ọfụd’ n’ime ihe ndị ahụ bw ihe iwu na-akwadoghị na agaghị m etinye ha ebe a.
वेब गबरा Gchịchị nwere ike ịbbe ebe nnwere onwe n’ezie। Dka ịmụmaatụ, w nwere ike uwu okwu n’ezoghụ ognị banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọụụla, n’agbanyeghị otu aka ekpe ma ụ b-aka nri, ari nri। ओ बु ईहे न्वेते, एनके ए-एटिने उर्फ ​​ना ओटु, एनके ओमा, ओबुघ आईहे डी नमा.
Nwee nnwere onwe ma cheta mgbe niile, ụ bụrụ na ị gbalịrọ ịnọ na-amaghị aha ma ka na-ejide gị, ị ga-enyerịrị gị ụgwọ maka arụ w bwr na -kwa nkwa-na ए s A का ई कुवेवे, हा जिदेरे ụb Sadna सद्दाम हुसैन, e b eghọ हा?